Kulanka Golaha Wasiirada oo looga hadlay qorshaha sugida Amniga ee Bisha Ramadaan : SomaliPress.tv
Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulankoodii joogtada ahaa, iyadoo looga hadlay qodobo kala duwan oo u badnaa, warbixino laga dhegeystay Wasaaradda Amniga Gudaha oo soo bandhigtay qorshaha Bisha Ramadan ee Sugidda Amniga Caasimadda.
Wasiirka Am niga Gudaha Mudane C/risaaq Cumar Maxamed ayaa Golaha warbixin ka siiyey qorshaha lagu sugayo inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadan Amniga Caasimadda, iyagoo iska kaashanayaan Ciidamadda Dawladda qeybahooda kala duwan, Maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwa Nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM, golaha ayaa boggaadiyey qorshahan waxana ay ku biiriyeen tallooyin lagu kabayo Amniga.
Wasiirradda Caafimaadka ayaa golaha Wasiirada warbixin ka siisay qaabkii ay ula tacaaleen dhaawacyadii weerarkii Hotel Ambassador, waxana uu goluhu ku booriyey Wasaaraddu in ay qaado tallaabooyin deg-deg ah oo gacan lagu siinayo dadka u baahan caafimaadka dibedda ah, iyadoo iskaashi lala sameynayo dawladaha saaxiibka la ah Soomaaliya.
Ugu danbeyn, Golaha Wasiirada ayaa warbixinno kala duwan oo la xiriira Hiigsiga 2016 iyo shirkii Madasha Hoggaamiyeyaasha ka dhageystay Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo si faah-faahsan uga hadashay waxyaabihii ka soo baxay shirka. Wasaaradda ayaa sidoo kale ka hadashay Markab sida mucaawino loogu talagalay dadka Soomaaliyeed oo hadda taagan Dekadda Muqdisho, waxana ay tilmaamtay in si deg deg ah loo gaarsiin doono bulshada Soomaaliyeed ee tabaaleysan.
« Wasiir Diini “120 ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay Weerarkii Halgan”
Hogaanka Amisom oo ka war bixiyay weerarkii Al Shabaab ee Halgan »